20 အကောင်းဆုံးအသစ် iPhone နှင့် iPad app များကိုနှင့်ဂိမ်းများယခုအပတ် - သတင်း Rule
20 အကောင်းဆုံးအသစ် iPhone နှင့် iPad app များကိုနှင့်ဂိမ်းများယခုအပတ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “20 အကောင်းဆုံးအသစ် iPhone နှင့် iPad app များကိုနှင့်ဂိမ်းများယခုအပတ်” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့6ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2015 13.31 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
နောက်ဆုံးပေါ်၏ယခုသီတင်းပတ်ရဲ့ roundup မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, အကြီးမြတ်ဆုံးအသစ် iPhone ကို နှင့် iPad app များကိုနှင့်ဂိမ်းများ. အားလုံးစျေးနှုန်းများအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကမှန်ကန်သောများမှာ, "IAP" In-app ကိုဝယ်ယူအ​​သုံးပြုမှုကိုညွှန်းနှင့်အတူ.
သင့်အနေဖြင့်ယခင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad App များ ပိုပြီးအကြံပြုချက်များအဘို့အ roundups, ဒါပေမယ့်အန်းဒရွိုက်ရွေးချယ်မှုဟာသင့် platform ပါလျှင်, အစစျဆေး အကောင်းဆုံး Android App များ roundups. ယခုရက်သတ္တပတ်ရဲ့ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူတွင်.
iOS အတွက် Minecraft Stop-Motion Movie, ဖန်ဆင်းရှင်.
Minecraft Stop-Motion Movie, ဖန်ဆင်းရှင် (အခမဲ့)
ဒီ Mattel မှအသစ်ဖြစ်၏, သငျသညျကအများဆုံးဖြစ်စေခြင်းငှါ Minecraft "Mini-ကိန်းဂဏန်း" ကလေးကစားစရာလိုပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်. ဒီ app သူတို့ကို Minecraft-့အခြေ stop-motion အတိုရုပ်ရှင်လုပ်မျှဝေဖို့အဘို့အလမ်းအဖြစ်ကလေးများမှာရည်ရွယ်, သူတို့ရဲ့ကျားကန်နှင့်အတူဓါတ်ပုံများ၏တစ်ဦးဆက်ခံယူပြီးများအတွက်လိမ္မာပါးနပ်ကြက်သွန်-အသားအရေကို interface နှင့်အတူ.
iPhone ကို / အိုင်ပက်
BuzzFeed သတင်းများ (အခမဲ့)
ဒီသတင်း app ကို BuzzFeed အားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့မိဘက website ကို ကျော်လွန်. အခြားသတင်းရင်းမြစ်များများပေါ်ဆွဲယူ. ဒါဟာရောနှောခြိုးဖောသတင်းနှင့်လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့, သင်နှစ်သက်တဲ့အမျိုးအစားအပေါ်တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများကြောင့် tweaks ဖို့ option နဲ့အတူ.
က BitTorrent Shoot (အခမဲ့ + IAP)
က BitTorrent (ကုမ္ပဏီ) ကက BitTorrent ကလူကိုသတိပေးမှမကြာသေးမီကစိတ်အားထက်သန်ခဲ့ (နည်းပညာ) ထိထိရောက်ရောက်ပတ်ပတ်လည်အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေကိုရွေ့လျားအကြောင်း, မယ့်ပင်လယ်ဓားပြတွေ filesharing အကြောင်း. shoot နောက်ဆုံးပေါ်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်: သင်သည်သင်၏ device မှသူငယ်ချင်းများနှင့်ကြီးမားသောဓာတ်ပုံများ၏နံပါတ်များသို့မဟုတ်မြင့်မားသောဖိုင်အရွယ်အစားဗီဒီယိုများဝေမျှကူညီဖို့ဒီဇိုင်း app တစ်ခု. ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်.
မီးဖိုချောင် Timer(s ကို) (£ 2,29)
အများဆုံးမီးဖိုချောင်-timer နေရာမှာ apps များနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါအရာသူတို့သာတစ်ကြိမ်မှာသင်အချိန်တစ်ချက်ကြကုန်အံ့ဖြစ်ပါသည်. ဒါက developer များ Diavo Lab မှ၎င်း၏ app သစ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်သည်တစ်ခုခုရဲ့: သင်သည်သင်၏ iOS ကို device ကိုရဲ့ screen ပေါ်မှာခြောက်ခုကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကို up time နိုင်, ထိုသို့လည်း Apple ကိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်.
ထိတွေ့ဘဝ: မြို့ (£ 2,29)
ဒီသားသမီးရဲ့ထုတ်ဝေသူ Toca Boca မှနောက်ဆုံးပေါ် App ဖြစ်ပါတယ်: ကာတွန်းမြို့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးစစ်မှန်တဲ့ sandbox ', ကလေးတွေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သောနေရာ, အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကောင်ရွှေ့နှင့် customize, သူတို့က On-screen ကိုမြင်သောအရာကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များကိုတက်စေပါ.
RA လမ်းညွှန် (အခမဲ့)
ဌာနေအကြံပေးအီလက်ထရောနစ်ဂီတများအတွက်အရှည်ဆုံး-ထူထောင်အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးစားသုံးသူ app ကိုကလပ်ညနှင့်ကခုန် gigs ၎င်း၏ဝပြောသောဒေတာဘေ့စပေါ်ဆွဲယူ. သင်အနီးဖြစ်ရပ်များ browse နိုင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့နောက်လာမည့်ကစားနေတာပါဘယ်မှာကြည့်ဖို့နက်ရ​​ှိုင်းသောအနုပညာရှင်နှင့် DJs များက၎င်း၏ဒေတာဘေ့စသို့တူး.
Picjoy – အလိုအလျောက်ဓာတ်ပုံ Organisation (အခမဲ့)
သင်သည်သင်၏ iPhone ကိုဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်စီမံထားခြင်းမရှိသောဖြစ်လာသကဲ့သို့ကြီးမားကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ကြရတယ်လိုလျှင်, Picjoy ကြည့်ရကျိုးနပ်သည်. ဒါဟာသူတို့ကိုခွဲခြားသူတို့နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေလုပ်သင့်ဓါတ်ပုံများပတ်ပတ်လည်အပေါငျးတို့သ metadata ကိုအသုံးပြုသည်, လည်းသင့်ရဲ့ cloud storage အကောင့်ကချိတ်ဆက်ဖို့ထို option နှင့်အတူ.
2000 တရားသူကြီး Dredd Featuring အေဒီ (အခမဲ့ + IAP)
သင်တရားသူကြီး Dredd ရုပ်ပြနှင့်ဂရပ်ဖစ်တ္ထု၏ပရိတ်သတ်ဆိုရင်ဒါဟာတော်တော်ကြီးမားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါသည်: Adventures ၏တရားသူကြီးရဲ့ 37 နှစ် archive ကိုမှ app တစ်ခုပေး a​​ccess ကို, စောင့်ရှောက်ဖို့စာရင်းသွင်းခြင်း option ကိုအတူသင်တို့သစ်ကို edition မှာအတူ updated.
ArtStack - Discover အနုပညာ (အခမဲ့)
ဒီ app အနုပညာ-ချစ်သူများများအတွက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်: သငျသညျ browse ရန်အဘို့အအနုပညာလက်ရာတစ်ခု "အွန်လိုင်းပြတိုက်", စုဆောင်းနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဝေမျှ. သင်၏စုဆောင်းမှုဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ပါသည်: သူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သောသောအနုပညာမှာ "stack", ရွေးချယ်စရာအခြားအသုံးပြုသူများ '' အရသာအတိုင်းလိုက်နာနှင့်တစ်ဦးချင်းအနုပညာရှင်တွေအားဖြင့်ပိုပြီးအကျင့်ကိုကျင့်ကြည့်ရှုရန်နှင့်အတူ.
မုံလာဉနီ – ခဏများအတွက် (အခမဲ့)
Snapchat အပေါ်ယူပြီး? မည်သည့်သစ်စဖွင့်ချိန်မှာအဘို့အတော်လေးအလုပ်တစ်ခုကို. beet စိတ်ကူးနှင့်အတူအနည်းဆုံးအားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်: အဲဒါကိုမိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော "သင်၏တစ်ခုလုံးကိုအသက်တာ၏ရုပ်ရှင်" သို့သင်တို့၏ဗီဒီယိုများစုဆောင်းလမျး၌ Snapchat ရဲ့ "ပုံပြင်" အင်္ဂါရပ်နှင့်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်, နှင့်ပြန်လာအတွက်သူတို့ကြည့်ရှု.
အဆိုပါအမှုဆောင် (£ 2,29)
ဒီ All-action ကိုဂိမ်းအားလုံး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တဲ့အမြင်အာရုံစတိုင်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာအဂိမ်းဖွင့်ကိုက်ညီ. အဲဒါကို 'em တက်နှင့်အစိတ်အပိုင်းပလက်ဖောင်း / အပြေးသမားကိုရိုက်အစိတ်အပိုင်းရဲ့, ဒီအမျိုးအစားများအတွက်ပထမဦးဆုံး - - ဘက်ခြမ်းမှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ run ဖို့ကြိုးစားသင်ဝံပုလွေနဲ့ off မြင်သည်အတိုင်း. ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်သော, ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့.
Lego မှ Minifigures အွန်လိုင်း (£ 3.99 + IAP)
ဒီ Lego မှ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, အွန်လိုင်းမှအာရုံနှင့်အတူ. သငျသညျအစစ်အမှန်လောကရှိမဝယ်မြားအပါအဝငျ - - ရှာဖွေစူးစမ်းသင် Mini-ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူဆော့ကစား, အပြင်းအထန်နဲ့ iOS တွင်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကစားခြင်း, PC ကွန်ပျူတာ, Mac နှင့် Linux ကို. ဒါဟာအစောပိုင်းကာလရဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိလက္ခဏာများကတိပေးကြသည်: ယခုရရှိနိုင်မယ့်ပင်လယ်ဓားပြကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ, In-app ကိုဝယ်ယူအ​​ဖြစ်အတိုင်းလိုက်နာရန်နှင့်ပိုပြီး.
နောက်ထပ်လွတ်လပ်သောအားရစရာ, ဤ: သင်တို့အပေါ်မှာ Mutant တစ်ခုစစ်တပ်တစ်သိပ္ပံနည်းကျဓါတ်ခွဲခန်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာထိပ်တန်း-Down အရေးယူမှုဂိမ်း 50 အဆင့်ဆင့်. ဒါဟာလုံးဝ spiffing ကြည့်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်လျောက်ပတ်သောစိန်ခေါ်မှုတင်ဆက်, သင်သည်သင်၏လက်နက်နှင့်လက်နက်အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောရန်သူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ရန်သင်ယူအဖြစ်.
CivMiner (အခမဲ့ + IAP)
သငျသညျကို "clicker" ဂိမ်း CivCrafter စွဲတယ်လိုလျှင်, သင်ဤဆက်ခံကြိုးစားကြည့်ပါချင်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာ Minecraft-ish မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆင်းတူးဖို့သင်ပယ်ရှင်းပုတ်ရှုမြင်, ဖုံးကွယ်ဘဏ္ဍာကို, သငျသညျသွားအဖြစ်ကျောက်, မိကျောင်း. ၎င်း၏နောင်တော်အဖြစ်သကဲ့သို့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော.
တုတ်တင်းနစ်ခရီးစဉ် (အခမဲ့ + IAP)
ကိုယ့် Stick ခရစ်ကက်သောနက်ရှိုင်းသောယုန်-အပေါက်ထဲကနေပေါ်ထွက်လာပြီးလျှင် 2, ငါပြုစုသူ Stick အားကစား '' အသစ်တင်းနစ်ကစားပွဲနှင့်အတူအခြားတကျဖို့မကြိုးစားနေပါတယ်. ဒါဟာသော်လည်းခက်ပါတယ်: ဤအတင်းနစ်အမျိုးအစားတခုတခုအပေါ်မှာမြတ်သောယူသည်, သင့်ရဲ့ရိုက်ချက်များနှင့်ရိုက်နှက်ရန်စိန်ခေါ်မှုများ၏အကွာအဝေးအဘို့အသေသပ်ပွတ်ဆွဲထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ.
Heroki (£ 5,99)
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကို iOS ပေါ်မှာအကောင်းဆုံး-ရှာဖွေနေဂိမ်းယခုအပတ် Sega ရဲ့ Heroki ဖြစ်ပါသည်, သောပတ်ဝန်းကျင်ဂရပ်ဖစ်ရှိပါတယ်. အဆိုပါဂိမ်းတိုင်းနီးပါးကိုတက်ကိုက်ညီ: ပျံနေတဲ့အရောအနှော, ကျသွားနှင့်အာဏာ-ups နှင့်အတူတိုက်ပွဲ, vanquish မှဘဏ္ဍာနှင့်ရန်သူများကိုတစ်ဦးမတူညီကြရွေးချယ်ရေး.
မထင်မှတ်သောဆပ်ကပ်ပြိုင်ပွဲ (အခမဲ့ + IAP)
ဒါကတစ်ဦးအလွန်ရီစရာဖြစ်ပါသည် (တစ်ဦးအပြုသဘောသဘောအရ) အလျားလိုက်-scrolling ပြိုင်ကားသမား, ဆပ်ကပ်ဇာတ်ကောင်ကိုမောင်းနှင်ပေးနှင့်အတူ. ဒါဟာရောင်စုံင်, စိန်ခေါ်မှုနှင့်နောက်တဖန်သင်တို့ကစားရန်ကထကောက်ကြောင်းတောင်းဆိုချက်များကို, သငျသညျစိတ်ပျက်ရသောအခါ၌ပင်.
သိုးခြင်းအားဖြင့်သွေးခွဲ (£ 2,29)
ဘေးဖယ် Minecraft, ဆဲတဲ့ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကစားသိုးတို့ကိုအတူလုံလောက်တဲ့ဂိမ်းရှိနေကြသည်မဟုတ်. သိုးခြင်းအားဖြင့်သွေးခွဲကြောင်းကုစားဖို့ကူညီ, ပဟေဠိများနှင့်သင်္ချာတစ်ဦးနှစျလိုဖှယျရောနှောနှင့်အတူ, ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရိုးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ပေမယ့်: ထိုဌာနခွဲဆောင်ပုဒ်အမြဲသိုးတို့အဘို့ Non-နာကျင်စွာထွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
နက်ရှိုင်းသောအာကာသကနေပုံပြင်များ (£ 4.99)
ဒီအမေဇုံဂိမ်းစတူဒီယိုကနေနောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, အမေဇုံမှာပြည်တွင်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလက်မောင်းကို. ဒါဟာအာကာသ setting ကိုအတူတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းစွန့်စားမှုဂိမ်းရဲ့, ကောင်းသောပဟေဠိရံဖန်ရံခါ-စိတ်ပျက်စရာထိန်းချုပ်မှုတက်သည်ဖြစ်စေအတူ.
နောက်ဆုံး, trivia. ဒီဘီဘီစီပဟေဠိပြပွဲ Eggheads အပေါ်အခြေခံပြီးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦး App ဖြစ်ပါတယ်, အထွေထွေအသိပညာစမ်းသပ်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လေးအထူးကုကျည်၏တူညီသောပုံစံနှင့်အတူ. ထိုသို့ပြသ၏စိတ်အားထက်သန်ပရိတ်သတ်တွေထက်ကျော်လွန်အယူခံမည်မဟုတ်ပါနေစဉ်, သင်သည်ထိုအုပ်စုတွင်နေလျှင်ကျိန်းသေအပေါ်ထွက်ပစ်ခတ်မှုများကိုတန်ဖိုးရှိင်. ဝမ်းနည်းပါတယ်.
သူတို့သညျအကြှနျုပျ၏ရွေးချယ်မှုများမှာ, သင်မူကားပေါ်တွင်သဖြင့်အဘယျသို့အထင်ကြီးခဲ့ကြ iOS ကို ရက်သတ္တပတ်၏နောက်ဆုံးစုံတွဲအတွက်? အဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းသင့်ရဲ့ထောက်ခံချက်အတွက်ဖွင့်သည်.
31375	0 ပန်းသီး, App များ, အပိုဒ်, အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို, က BitTorrent, BuzzFeed, ယဉ်ကျေးမှုကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, အားကစားပြိုင်ပွဲ, IOS ကို, iPad, iPhone ကို, Lego မှ, မီဒီယာ, Minecraft, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, စမတ်ဖုန်း, စတူးဝပ်သောင်, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← ပါကင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးများကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူခြင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, လေ့လာမှုပြပွဲ အကျိတ်တွေကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးပြဟော်မုန်းအဖြစ်ရင်သားကင်ဆာမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်း →